म सिकिस्त भएँ भनेर भेट्न आउनु भएको ? | Lifemandu
| शुक्रबार, ३१ साउन, २०७६
काठमाडौं । भरिभराऊ बैठक कक्षमा प्रसन्न मुद्रामा प्रवेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोध्नु भयो ‘म सिकिस्तै भएँ कि भन्ने लागेर भेट्न आउनु भएको हो कि क्या हो ?’ त्यसपछि ताजगीपूर्ण मुद्रामा उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउनु भयो ।
आफ्नो प्रतिक्षा गरिरहेका झापा क्षेत्र न. ५ का अगुवा कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्न जानुअघि संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
झापा ५ नं निर्वाचन क्षेत्र र समग्र जिल्लाको विकास निर्माणका सम्बन्धमा चर्चा गर्न वालुवाटार पुगेका नेकपाका अगुवा कार्यकर्ताहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यको बिषयमा हिजो चलाइएका निराधार हल्लाहरुको प्रसंग उल्लेख गर्दै भन्नु भयो, “हिजो मलाई एकछि ९९ देखि १०० डिग्री ज्वरो आएको थियो । एउटा सिटामोल खाइदिए पछि सबै निको भयो । तर अफवाह म सिकिस्त भएजस्तै फैलाइयो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सरोकार राख्ने शुभचिन्तकहरुसँग भन्नुभयो “गत हप्ता सिंगापुरमा आँखा,कान,घाँटी र बुढी औंलादेखि कान्छी औंलाका नङसम्म परीक्षण गरेर आएको छु । डाक्टरले सबै अंग ठिक छ भनेका छन् । अब २०–२५ बर्ष केही हुँदैन भन्छन् । त्यस कारण म बिरामी होइन ।”
नेकपा अगुवा कार्यकर्ताहरुले झापा क्षेत्र नं ५ को दमक ,गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने परियोजना लगानी बोर्डले स्वीकृत गरिदिएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले औद्योगिक पार्क निर्माण हुन लागेकोमा सबैलाई बधाइ दिनुभयो ।
विषालु च्याउ खाँदा एकजनाको मृत्यु, ३ बिरामी
मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिका–७ भिराङमा विषालु च्याउ खाँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य तीनजना सिकिस्त बिरामी परेका छन् ।
‘एमालेलाई मधेसविरोधी भनेर वा नभनेर केही फरक पर्दैन’
काठमाडौँ, ६ भदौ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले एमालेलाई मधेसविरोधी भनेर वा नभनेर केही फरक नपर्ने बताएका छन्।
अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर जनतालाई त्रसित पार्न खोजियो : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर जनतालाई त्रसित पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।